Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Ny fahatongavan'ireo mpizahatany any Belize dia manohy manoratra fitomboana mahavariana
Ny antontan'isa farany dia mampiseho fa ny fahatongavan'ireo fizahan-tany any Belize dia manohy mitantara fitomboana mahavariana. Nisy fitomboana 16.6% sy 19.9% tamin'ny fahatongavan'alina sy sambo fitsangantsanganana taorian'ny nahavitan'ny telovolana fahatelo tamin'ny taona. Midika izany fa i Belize dia mitohy ho toerana fialantsasatra malaza any Amerika Afovoany amin'ireo izay mitady fitsangatsanganana sy fialan-tsasatra miavaka.
Ity manaraka ity dia fahatapahan'ny statistika farany farany.
FAHATONGAAN'NY OVEROWIGHT GREW BY 16.6% PARA NY TAONA talohan'izay
Tamin'ny volana septambra 2018, mpitsidika 21,000 mahery no tonga tany Belize. Izany dia nampiseho fitomboana 10.1% ny mpitsidika tamin'ny septambra 2017. Tamin'ny faran'ny telovolana fahatelo tamin'ny taona 2018, dia nitombo 16.6% ny mpitsidika nandritra ny alina noho ny tamin'ny taona lasa.
% miova% miova% miova
21,726 14.7 22,656 4.3
29,510 Nov 1.3 -36,203 22.7 XNUMX
Dec 40,561 1.5 49,131 21.1
AO AMIN'NY FAHAROA FAHATELO, tonga 19.9% ny mpitsidika mpitsangantsangana.
Tamin'ny volana septambra 2018, mpandeha sambo fitsangantsanganana 66,000 mahery no nitsidika ny firenena Belize. Izany dia nampiseho fitomboana 15.9% na mihoatra ny 9,100 mpandeha fitsangantsanganana hafa raha ampitahaina tamin'ny volana septambra 2017. Ny antso an-tsambo fitaterana dia 21 no isan'ity volana ity. Tamin'ny faran'ny telovolana fahatelo, dia tonga 19.9% ny totalin'ny mpitsidika fitsangantsanganana an-dranomasina nandritra ny taona. Ny fahatongavana ho an'ny taona 2018 dia ahitana ireo mpitsidika avy any amin'ny Belize City sy Harvest Caye Seaports.
vs.15 vs. '16 vs. '17
56,697 38.3 76,403 34.8
Dec 142,551 -0.7 111,171 -22.0
Na eo aza ny halehibeny, Belize dia fitambarana kolontsaina, manintona ary mahafinaritra - toerana iray izay mandray tanteraka ny lovany amerikanina afovoany sy Karaiba, mankalaza ny fahasamihafana tsy manam-paharoa ary mirehareha amin'ny hatsarany voajanahary manaitra toy ny paradisa fialantsasatra tonga lafatra eto amin'ity faritra ity .
Ny antontan'isa momba ny fizahantany farany dia tsy manamarina an'io zava-misy io fa mampiseho koa ny firoboroboan'ny fitomboana tsy miova. Ny taona ho avy dia mampanantena ny hitondra fivoarana mahaliana amin'ny fotoana hiomanana amin'ny fitomboana bebe kokoa ny indostrian'ny fizahantany eto amintsika.
Minisitry ny fizahan-tany any Zimbaboe izao ao amin'ny Birao fizahan-tany afrikanina